Imodeli ye-Wholesale Life Chalicotherium enokunyakaza nomsindo wangempela Umkhiqizi Nomhlinzeki |I-Sanhe Robot
Imodeli ye-Chalicotherium yosayizi wokuphila enokunyakaza nomsindo wangempela
Isikhathi esiholayo:Izinsuku ezingu-15-30
Ongakukhetha: Ukuxubha, i-roll coating
Omaka:I-inosaur Skeleton Cast, Amathambo E-Dinosaur Alengayo, Amathambo E-Dinosaur, Isithombe Se-Dinosaur Skeleton, thenga i-replica yamathambo e-dinosaur
Igama lomkhiqizo:Imodeli yosayizi wempilo ye-Chalicotherium enokunyakaza nomsindo wangempela Usayizi wempilo enkulu ye-animatronic Chalicotherium Le Chalicotherium yenzelwe ipaki yetimu yezilwane engaphandle Ukuphakama kwale Chalicotherium ngamamitha ayi-6 Umbala nosayizi kungenziwa ngokwezifiso I-Chalicotherium iyisilwane esikhulu sangaphambi komlando futhi iwumkhiqizo owenziwe ngokwezifiso oyivelakancane uma kuqhathaniswa.umdwebi wethu ubuyisele isimo nokubukeka kwawo ngokusekelwe esithombeni sefossil.Lo mkhiqizo ungasetshenziswa ukuze kwandiswe ulwazi lwezilwane zangaphambi komlando epaki lezilwane zangaphambi komlando. Ulwazi lwezilwane ze-animatronic
Ukunyakaza:1.umlomo uvule uvale 2.ikhanda phezulu phansi 3.ikhanda left right 4.breathing 5.tail sway 6.eyes blink
Okokufaka:I-AC 110/220V,50-60HZ I-plug:Ipulaki ye-Euro/izinga laseBrithani/SAA/C-UL/noma kuncike esicelweni Imodi yokulawula:Okuzenzakalelayo/Infrared/remote/coin/inkinobho/izwi/touch/izinga lokushisa/ukudubula njll. Ibanga lokuvikela amanzi:IP66 Izimo zokusebenza:Ukukhanya kwelanga, imvula, olwandle
Bonke abahlinzeki bempahla kanye nezinsiza bahloliwe umnyango wethu wokuthenga.Bonke banezitifiketi ezihambisanayo ezidingekayo, njenge-CE, UL, ISO9001:2008, futhi bafinyelele amazinga amahle kakhulu okuvikela imvelo.
1. Ibhokisi lokulawula: Ibhokisi lokulawula lesizukulwane sesine elenziwe ngokuzimela. 2. I-Mechanical Frame: Insimbi engagqwali nama-brushless motors asetshenziselwe ukwenza izilwane iminyaka eminingi.Uhlaka lwemishini yesilwane ngasinye luzohlolwa ngokuqhubekayo nangokusebenza okungenani amahora angama-24 ngaphambi kokuthi kuqale inqubo yokumodela. 3. Ukumodela: Igwebu eliminyaniswe kakhulu liqinisekisa ukuthi imodeli ibukeka futhi izwakala ngezinga eliphezulu kakhulu. 4. Ukubaza: Ochwepheshe bokuqopha abachwepheshile banesipiliyoni seminyaka engaphezu kweyi-10.Bakha ukulingana okuphelele komzimba wesilwane ngokusekelwe ngokuphelele kumathambo ezilwane kanye nedatha yesayensi.Bonisa izivakashi zakho ukuthi inkathi ye-Triassic, ulwandle neCretaceous yayibukeka kanjani ngempela! 5. Ukudweba: Inkosi yokudweba ingapenda izilwane ngokuvumelana nemfuneko yekhasimende.Sicela unikeze noma yimuphi umklamo 6. Ukuhlola Okokugcina: Idayinaso ngayinye izophinde isetshenziswe ngokuqhubekayo ngosuku olulodwa ngaphambi kokuthunyelwa. 7. Esitokweni: Sigcina izilwane ezingaphezu kuka-30 esitokweni ukuze sizikhethele. 8. Ukupakisha : Izikhwama zamabhamuza zivikela izilwane ekulimaleni.PP ifilimu ukulungisa izikhwama bubble.Isilwane ngasinye sizopakishwa ngokucophelela futhi sigxile ekuvikeleni amehlo nomlomo.Ibhokisi lokulawula lizofakwa endizeni. 9.Ukuthumela ngomkhumbi: Chongqing, Shenzhen, Shanghai, Qingdao, Guangzhou, njll.Siyazamukela ezokuthutha ezihamba phansi, ezomoya, zasolwandle kanye nezokuthutha zamazwe ngamazwe. 10. Ukuhlanzeka: Siyimboni yokuthekelisa yezilwane ezichwepheshile.Sinolwazi lwaseYurophu, eNingizimu Afrika, eMpumalanga naseNingizimu Asia, e-Australia, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, njalonjalo.Amazwe amakhulu ahlanganisa i-United States, i-United Kingdom, i-Canada, i-Brazil, i-Argentina, i-Japan, i-Philippines, i-Malaysia, i-Australia, i-Russia, i-Thailand, i-UAE, i-Poland, i-Spain, i-Germany, i-Croatia, njll. 11.Ukufakwa endaweni: Sizothumela onjiniyela endaweni yamakhasimende ukuze bafake izilwane.
Idizayini yemishini:Senza idizayini eyimishini yawo wonke ama-dinosaur, siwahlinzeka ngohlaka oluhle.Lokhu kuqinisekisa ukuthi ukugeleza komoya wabo nezinye izingxenye ezihambayo zingasebenza ngaphandle kokungqubuzana, zithuthukise kakhulu impilo yesevisi! Ukuma kwe-Dino & Umklamo Wombala: Siklama ukuma kwe-dinosaur, izici ezinemininingwane nemibala ngaphambi kokuthi ukukhiqizwa kuqale.Lokhu kuqinisekisa ukuthi uthola lokho kanye okufunayo. Idizayini Yezithombe:Usinikeza izithombe nezinhlelo, sibuyela kuwe wonke umbukiso wezilwane! Idizayini Yemininingwane Yombukiso:Idizayini yemininingwane emihle ikhombisa ikhasimende indawo yokugcina yombukiso.Futhi sihlinzeka ngomklamo wepulani, idizayini yamaqiniso e-dino, idizayini yesikhangiso, njll.
usayizi wempilo ngokwezifiso isifanekiso se-animatronic yokwenziwa yezilwane ipaki lokuzijabulisa izinto eziqoshiwe ezenziwe ngezandla usayizi wokuphila usayizi wokuphila ongaphandle inkundla yokudlala yezilwane isifanekiso sokuphila usayizi wesilwane imodeli yangaphambi komlando wesilwane usayizi wesilwane imodeli yokwenziwa yezilwane ipaki impahla yokuzijabulisa indaba ephathwayo ipaki i-animatronic sculpture itimu ipaki irobhothi isilwane esingokoqobo izilwane irobhothi inkundla yokudlala imodeli yesilwane imodeli yesilwane esitrobheni izilwane sekulingisa isilwane yokwenziwa isilwane animatronic isilwane ukudayiswa
Umkhiqizo wefekthri okhangayo ocacile wezilwane ezibukhoma Di...
Isazi sangempela sezilwane sepaki yepaki i-Woolly Rhin...
Ihlosi eliyimodeli yezilwane eyenziwe ngerobhothi elenziwe ngesandla ...
Isinambuzane Esikhulu se-animatronic animatronic Mod...
I-zigong sanhe robot Technology Co., Ltd